Sidee Amarka Hawlgalku iigu diyaariyey Barnaamijyada | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 22, 2007 Sabtida, Oktoobar 17, 2015 Douglas Karr
Algebra had iyo jeer wuxuu ahaa maaddo aan jeclahay. Ma jiraan aragti badan oo ku lug leh, kaliya sanduuqa aaladda hababka iyo amarka hawlgallada ee lagu xallinayo. Haddii aad dib ugu soo noqoto dugsiga sare, waad xusuusan doontaa (laga soo xigtay Xisaab.com):
Marka hore samee dhammaan hawlgallada jiifa gudaha qawska.
Marka xigta, wax shaqo ah ku samee jibbaarayaasha ama xagjirnimada.
Ka shaqeynta bidix ilaa midig, samee isku dhufasho iyo kala qeybin.
Ugu dambeyntiina, ka shaqeynta bidix ilaa midig, samee wax kasta oo isugeyn iyo kalagoyn ah.
Waa tan tusaalaha ka Xisaab.com:
Dalbashada tan horumarka waa wax fudud.
Hawlgallada ku jira qaangaarka waxay u dhigantaa qaabeynta boggeyga, qaab fudud oo HTML ah. Waxaan ku bilaabayaa bog maran oo si joogto ah ayaan u cabirayaa ilaa ay ka hesho dhamaan walxaha aan raadinayo. Si loo hubiyo naqshadeynta is-beddelka isticmaalaha ee is-bedbeddelaya, marwalba waan la shaqeeyaa XHTML iyo CSS. Meel kasta oo ay jiraan tibaaxyo (tusaale. Xog-ururin ama natiijooyin barnaamij), waxaan ka faalloodaa koodhka oo waxaan ku qoraa qoraallada, sawirrada, ama walxaha caamka ah.
Marka xigta, waxaan la shaqeeyaa wax jibbaarayaal ah ama xagjir ah. Kuwani waa barnaamijyadayda ama howlahayga keydinta xogta ee soosaaraya, beddelaya, iyo culeysyada (ETL) xogta sida aan rabo inaan ugu muujiyo boggeyga dhameystiran. Runtii waxaan ku shaqeeyaa talaabooyinka amarkaas haddii aan ku qaabeeyo su'aasha dhabta ah natiijooyinka waxqabadka la hagaajiyay.
Midda xigta waa isku dhufasho ama kala qaybin. Halkani waa halka aan ka fududeeyo koodhkayga. Halkii laga heli lahaa hal qoraal monolithic weyn, I aan la taaban karin inta koodhka ah ee aan geli karo waxaa ka mid ah faylal iyo fasalo. Horumarinta webka, waxaan u muuqdaa inaan ka shaqeeyo kor ilaa hoose, dabcan.
Ugu dambeyntiina, ka shaqeynta bidix ilaa midig, dhammaan ku darista iyo kalagoynta. Tallaabadani waa habka ugu dambeeya, iyadoo la adeegsanaayo xogaha ugu dambeeya ee foomka ansaxinta, qaybaha qaabka, qaladka wax ka qabashada, iwm. Mar labaad, waxaan u muuqdaa inaan ka shaqeeyo kor ilaa hoose.
Horumarka wanaagsani kama dhib badna dhibaatada Algebra weyn. Waxaad leedahay doorsoomayaal, isleegyo, shaqooyin… iyo amar macquul ah oo hawlgallo ah si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican. Waxaan arkaa jabsadayaal fara badan oo si fudud 'u shaqeeya' laakiin waxaad heleysaa (sidaan qabo) haddii aadan qorsheynin habkaaga oo aad uhogasho hab macquul ah, waxaad is arkeysaa inaad qorto lambarkaaga si isdabajoog ah iyo in kabadan dhibaatooyin ama isbeddel ayaa loo baahan yahay.
Algebra waligey wuxuu ahaan jiray sida xujo jigsaw ah aniga. Had iyo jeer waa mid dhib badan, madadaalo leh, waxaanan ogaa in jawaab fudud ay suurtagal tahay. Dhammaan qaybaha ayaa jira, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad raadiso oo aad si sax ah isugu dhejiso. Koodh qoristu kama duwana, laakiin way ka raaxaysi badan tahay maxaa yeelay wax soo saarkaaga halxiraalaha ahi waa wax kasta oo aad jeclaan lahayd inuu noqdo!
Anigu ma ihi horumariye rasmi ah, mana ihi xitaa mid weyn. Waxaan leeyahay; si kastaba ha noqotee, waxaan helay bogaadin ku saabsan koodhka aan ku qoray mashaariic badan. Waxaan aaminsanahay in badan oo ka mid ah sababta oo ah waxaan sameeyaa waxyaabo badan oo horay u sii qorsheyn ah, sabuurad, sabeynta, iwm. Kahor intaanan xitaa qorin qoraalka ugu horreeya ee qoraalka.
Tags: xisaabtanidaamka hawlgalkabarnaamijyada
Oktoobar 23, 2007 at 12:33 AM
Tani waxay ahayd qoraal quruxsan oo hagaagsan. Marnaba kuma fikirin inaan ku dalbado amarka howlaha wax la taaban karo sida horumarka, laakiin markii aad ka fikirto, waxaad arkaysaa inay labadooduba si isku mid ah u muuqdaan. Waa inaan calaamadeeyaa kan oo aan u adeegsadaa tixraac ahaan. ;]
Oktoobar 23, 2007 at 5:36 AM
Mahadsanid Stephen! Waxaan ka shaqeynayaa mashruuc weyn oo ka socda shaqada hadda oo ku fidsan miisas badan iyo bogag badan oo si aad u macquul ah (dhammaantood ku xiran hal bog oo adeegsanaya Ajax) waxaanan fiiro gaar ah u yeeshay sida taxaddarka leh ee aan ahaa waxaanan go'aansaday inaan wax ka qoro.
Waxyaabo xiiso leh!